Izipho ziintsikelelo zakho ozinika umntu. Kuthiwa izipho zibonisa imfesane yakho kubantu obathandayo. Isipho asidingi kubiza kakhulu ukushiya umbono kumamkeli; luthando olunzima.
Xa sigqibe kwelokuba sinike umntu izipho, ubukhulu becala siyabambeka ekukhetheni isipho. Sifuna ukukhetha isipho esithandekayo kwaye siphantsi kohlahlo-lwabiwo mali. Sonke siyazama ukuba isipho kufuneka sihambelane neemfuno kunye neminqweno yomamkeli. Ngokunxulumene, iIiT-shirts ezizodwa, izambatho ezifanayo, izambatho, kunye neempahla zinokuba lolona khetho lufanelekileyo lokunika umntu isipho. Unoku-odola ezi mpahla zenzelwe umntu kwi-intanethi ngamaxabiso afanelekileyo. Apha siza kuqwalasela indlela ezi mpahla zimbini zilunge ngayo njengesipho.
Izithandani ezinxibe iimpahla ezinje nge-hoodies, i-T-shirts, kunye neempahla zinika amandla kwi-bond bond. Ezi zipho zibabonelela ngenye indlela yokubonisa nokubhiyozela uthando lwabo. Iya kubakhumbuza nothando lwakho kubo bobabini.
Bonakalisa uthando lwabo omnye komnye.
Izambatho ezenziwe ngentando yakho yindlela efanelekileyo yokubonisa uthando phakathi kwabatshatileyo. Ixelela abanye ukuba bonwabile omnye nomnye.
Isipho sakho esenziwe ngokwezifiso sinokubanceda ukuba babhengeze ukuba banobudlelwane. Ngoku, akukho mfuneko yokuba bacacisele wonke umntu malunga nobume babo bomtshato. Kuya kufuneka banxibe isinxibo esenziwe ngokwezifiso, kwaye isinxibo eso siyakubonisa ngokucacileyo ubudlelwane babo.
Izambatho zesibini zinokunika imeko elungileyo yokulingana kwesi sibini kuba banxibe ilokhwe efanayo kunye noshicilelo olufanayo okanye ukubhala.
Ungabanika ezi mpahla ngaphambi komtshato wabo okanye kwimipu yabo yangaphambi komtshato. Isipho sakho siyakubanika ukonwaba kwaye sisebenze njengesixhobo sokubhengeza umcimbi wabo omkhulu.
Ezi zipho azilungelanga umsitho womtshato kuphela kodwa zikwangumbhiyozo womanyano. Ungabapha ezi mpahla zenziwe ngokwezifiso kwizikhumbuzo zemitshato.
Izipho yindlela eyamkelweyo ngokubanzi yokubonisa uvelwano kubantu obathandayo. Akukho mntu unokuyikhanyela into yokuba izipho zishiya impembelelo engapheliyo kumamkeli. Isipho sakho siya kubonisa abahlobo bakho kunye nabantu obathandayo uthando lwakho ngabo.Izibini ezenziwe ngokwezifiso, iihoodi, kunye nezinxibo zezona zipho zibalaseleyo zokubonisa kuba ayizizo izipho nje kodwa ikwangubungqina bothando lwabo.